Isbitaaladii loo asteeyay xanuunka Covid-19 ayaa la sheegay in ay ku dhow yihiin buux dhaaf… – Hagaag.com
Isbitaaladii loo asteeyay xanuunka Covid-19 ayaa la sheegay in ay ku dhow yihiin buux dhaaf…
Posted on 28 Febraayo 2021 by Admin in National // 0 Comments
Dowladda Somalia ayaa waxay sheegtay in dadka qaba xanuunka COVID-19 ay buuxdhaafiyeen Isbitaalada Magaalada Muqdisho, taasoo muujinaysa sida xanuunka uu dalka ugu faafayo.
Wasiirka Caafimaadka Somalia, Fowsiya Abiikar Nuur ayaa sheegtay in Isbitaalada loo asteeyay xanuunka COVID-19 ay aad u kordheyso tirada la seexinayo.
“Walaalayaalow waxaan idin leenahay taxadarka aad buu u badan yahay. Isbitaaladii loo asteeyay sida Martini iyo Sumait ee Jaamacadda Simad, runtii tirada aad iyo aad bay u sii kordheysaa.” Ayay tiri Wasiiradda.
Iyadoo ay isa soo tarayaan dadka xanuunka laga helayo ayay dhanka kale Wasiir Fowsiya sheegtay in magaalada uu gabaabsi ku yahay Oxygen-ka, xilli shirkadaha sameeya ay yar yihiin, baahida loo qabana ay aad u badan tahay.
“Magaalada Oxygen-keeda aad ayuu u yar yahay shirkadaha sameeya, baahida aad bay u badatay.” Ayay tiri Fowsiya Abiikar oo Warbaahinta la hadashay.
Waxa kaloo ay sheegtay in ay jiraan dad badan oo xanuunka calaamadihiisa ugu geeriyooday Caasimadda Muqdisho, kuwaa oo aan imaan goobaha dadka looga baaro COVID-19.
“Waxaa jira dad badan oo calaamadaha COVID-19 u dhintay ama la xanuunsanaya, oo aanan Isbitaal soo doonan. Gobolka Banaadir aan joogno cudurka wuxuu u fidayaa si aan caadi ahayn.” Ayay sii raacisay Wasiiraddu.
Hadalka Wasiir Fowsiya ayaa imaanaya maalin ka dib, markii Adam Abdul-mowla, Isku Duwaha Arrimaha Bani’aadanimada Qaramada Midoobey ee Xafiiska Magaalada Muqdisho (UNSOM) uu sheegay in xaaladaha COVID-19 ee dalka ay sare u kacday boqolkiiba labaatan (20%).